Noocyada Ugu Wanaagsan Ee Ragga Loo Qaybiyo | Ragga Stylish
Ragga waxaan jecel nahay inaan is daryeelno oo waxaan dooneynaa inaan timaheena kala baxno, Ka saar xad-dhaafka qodobada qaar ama ka ciribti qodobada aysan u baahnayn. Waxaa jira xal wax ku ool ah oo aan gacanta ku haynay sannado badan, kaas oo ah xiirashada jirka, waana taas Sanadahan oo dhan waxay u xuubsiibteen waxqabad iyo dhammaad.
Waxaan horeyba u heli karnaa wax aad u wanaagsan mandiillo oo aan sababin jiiditaanka, cuncunka iyo xanaaqa faraxsan xiirashadaada kadib. Si aad u hesho waxa ugu fiican suuqa, shaki la'aan waa inaad daboosho sifooyinkaan:
Garbaha cimri dherer sare, Taasi ma daxaliso oo waa hypoallergenic.
Madaxeedu waa inuu ahaadaa mid jilicsan oo ka kooban heerar kala duwan xiirista, maaddaama shanlooyinka hagayaashu ay gaari karaan dherer dhan 0,2 mm.
Taasi waa fudeyd iyo weji badan maaraynta, wireless waqti la siinayo ismaamulkooda iyo waxyaabaha aan aadka u jeclahay waa taas waxaa loo isticmaali karaa biyaha hoostooda.
Sifooyin kale oo ka mid ah astaamaheeda ayaa ah in loo isticmaali karo oo kaliya in laga saaro timaha jirka, laakiin sidoo kale ka kooban qalab kala duwan si looga saaro timaha meelaha sida wajiga gadhka, dhagaha ama sanka.
1 Ragga xiirashada jirka
1.1 Philips 5000 Taxanaha BG5020 / 15
1.4 Remington BHT250 Xasaasiyad
Ragga xiirashada jirka
Philips 5000 Taxanaha BG5020 / 15
Xiirashada jidhkani waa mid ka mid ah xiirayaasha ugu wanaagsan ee suuqa lagu qiimeeyo, macaamiisheeda ayaa ku taageera. Waxaa lagu sameeyay gacan dheer oo dheeri ah si aad dhabarka u xiirto oo aad u gaarto geesahaas si fudud.
Tilmaamaheeda ayaa lagu soo koobay xiirashada jilicsan loogu talagalay meelaha sida kilkilooyinka, xabadka, caloosha, dhabarka, garbaha, aagga xubnaha taranka iyo xagjirnimada. Caleemaheeda waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo maqaarka u roon iyo hypoallergenic
Waxay kakooban tahay shan shanleeyo oo tilmaam ah si loo sameeyo dillaac dabiici ah (3mm, 3mm, 5mm)
Waxaa loo isticmaali karaa qubeyska hoostiisa ama waa lagu nadiifin karaa tubbada hoosteeda si loogu nadiifiyo si fudud.
Waa dib loo cusbooneysiin karaa oo lagugu dalacayaa kaliya 1 saac.
Waxay leedahay is-maamul 60 daqiiqo ah iyo tilmaame heer batari ah.
Jir-xiirahan jirku wuu wada leeyahay oo wuu leeyahay dhammaan noocyada suurtogalka ah si aad u xiirto dhammaan qaybaha jirkaaga. Ragga badan ayaa mandiilkani waa mid gaar ah maadaama aad garkaaga ku soo bandhigi karto ku dhowaad dhammaan heerarka, waxay kaloo leedahay ikhtiyaarka timaha jirka oo la xiiro iyo xitaa waxaad timaha ka jaran kartaa dhagaha iyo sanka. Caleemaheeda ayaa ku siinaya a damaanad qaadka jilicsanaanta iyo adkeysiga.
Waxay ka kooban tahay 4 shanlo oo leh 13 set dherer ah oo u dhexeeya 0,5 ilaa 21mm.
Waa lagu nadiifin karaa biyaha hoostiisa waxaana xitaa loo isticmaali karaa qubeyska.
Waa dib loo soo celin karaa, waxaa dib looga buuxin karaa 1 saac.
Waxay leedahay ismaamul dhan 60 daqiiqo nalka uu hogaaminayo wuxuu ku siinayaa calaamado muujinaya batteriga.
Mashiinkaani wuxuu bixiyaa wax weyn garbaha adag ee lagu sameeyay dahaadhka titanium. Waxay leedahay madax kala duwan oo laysku beddeli karo si ay ugu awoodaan inay mid walba u isticmaalaan meelo kala duwan oo jirkaaga ka mid ah iyo Waxaa lagu gartaa iyadoo leh daab ballaaran si loogu daboolo dusha sare ee xiirashada hal marin. Waxay ka kooban tahay qalab si aad u xiirto garka oo aad u hesho meel u dhow dhow.
Waxay ka kooban tahay shanlooyinka kala duwan ee 2, 4, 6 iyo 12 milimitir oo tirtira timaha ugu gaaban ilaa 0,2 milimitir.
Waa biyo-diid waxaana si fudud loogu nadiifin karaa tuubbada hoosteeda.
Waa dib loo cusbooneysiin karaa laakiin waqtigeeda dib u buuxinta waxay u dhaxeysaa 14 iyo 16 saacadood.
Waxay leedahay is-maamul 40 daqiiqo ah.
Remington BHT250 Xasaasiyad
Mashiinkaan timaha looga saarayo jirka waxaa loogu talagalay sii raaxo leh oo aad ugu jilicsan tahay xiiristaada, adigoon keenin xanaaq. Waa iftiin iyo isafgarad si ay u fududeyn karto hawsha, maaddaama loogu talagalay in lagu yareeyo nabarradaas xanaaqa leh ee laga soo qaadan karo iyo iska ilaali xagashada yaryar hargahaas xasaasiga ah.
Waxay ka kooban tahay 3 shanlo oo shanlo go'an ah oo dhererkoodu yahay 2, 4 iyo 6 mm.
Waa lagu dhaqi karaa biyaha hoostooda si loo hubiyo nadaafad weyn, sidaa darteed waa biyo diid.
Waqtigeeda dib u buuxinta waa 4 saacadood waxayna leedahay tilmaame LED ah oo tilmaame u ah baytarigeeda.
Waxay leedahay is-maamul 60 daqiiqo ah.
Naqshadeedu waa mid ergonomic ah oo waxtar badan leh tan iyo wuxuu ka kooban yahay shan madax oo kala go'i kara inaad awoodo inaad xiirto qayb kasta oo jirka ka mid ah iyo xitaa gadhka. Gacanteeda ayaa fududahay in la maareeyo sababo la xiriira qabashadeeda. Waxaa laguu balan qaadayaa inaad xiirto adigoon maqaarka taaban iyo timo jarista hab wax ku ool ah oo wadar xiiran leh.
Waxay ka kooban tahay madax kala duwan oo meerto ah si ay timaha ugu xiirto isku heer.
Looma isticmaali karo qubeyska hoostiisa.
Is-maamulkeeda ma gaarayo wax ka badan 60 daqiiqo.
Haddii fikraddaadu tahay inaad waxbadan ka ogaato sida loo fuliyo labka nin oo wata farsamooyin kale, waxaad ka akhrisan kartaa mid ka mid ah qodobbadayada labku wax yeelayo. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka timo ka saarista korontada gudaheeda waad ka akhrisan kartaa isku xirkaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Ragga ugu xiirista badan jirka ragga